Iindaba ezimnandi: ixabiso le-iPhone 6s aliyi kunyuka | IPhone iindaba
Iindaba ezimnandi: ixabiso le-iPhone 6s aliyi kunyuka
UPablo Aparicio | | iPhone 6s, IPhone 6s Plus
Kuninzi okuqikelelweyo nge Ixabiso eliza kuba nalo i-iPhone 6s kunye ne-iPhone 6s Plus. Akukho mntu unokukhanyela ukuba ixabiso laso nasiphi na isixhobo esithwele iapile elilumkileyo asiyonto inokubizwa njengexabiso eliphantsi. Iimveliso zabo zinomgangatho kwaye abo bazisebenzisayo bonwabile ngoxolo lwengqondo lokuba ukusebenza ngokubanzi okufanelekileyo, ukhuseleko kunye nokukhululeka kweenkqubo zabo zokusebenza kusinika, kodwa konke oko, kunye negama, kuza ngexabiso. Elo xabiso lelokuba ihlobo lonke, okanye ihlobo esicinga ngalo malunga nokutshintsha isiphelo sethu, sibona umboniso we-iPhone ngentshiseko kunye noloyiko, umdla wokubona ukuba isiphelo sendlela esilandelayo siyakuba njani kwaye siyoyika ukuba asikwazi / sifuna ukucinga inkcitho.
Emva kokudideka kunye nenkxalabo esengqiqweni, sinokubona ukukhanya kancinci ekupheleni kwetonela sibulela iwebhusayithi yeDatshi zobugcisa.nl, oqinisekisa ukuba amaxabiso ee-smartphones ezilandelayo zeapile yokuluma ayiyi kwandiswa xa kuthelekiswa namaxabiso eemodeli zangaphambili, kodwa iqinisekisa ukuba kusekho imodeli ye-16GB.
1 IPhone 6s kunye ne-iPhone 6s Plus amaxabiso
1.1 iPhone 6s
1.2 IPhone 6s Plus
IPhone 6s kunye ne-iPhone 6s Plus amaxabiso
16GB - € 799
64GB - € 899
128GB - € 999
Enye into ekungayi kubakho lutshintsho kuyo yimibala ekhoyo, kuba kusenokubakho iimodeli ezintathu ngale ndlela kwi-Space Grey, Gold kunye neSilver. Ukuba oku kuyinyani, Akuyi kubakho rose igolide, into echasene namahemuhemu akutshanje. Kubonakala ngathi malunga nemibala, akukho mntu uyavuma.
Kufuneka kukhunjulwe ukuba, nangona ixabiso iPhone 6 Ukunyuka okubiza kakhulu ukuya kwi- € 999, imodeli yesiqhelo ye-64GB yabona ukunyuka kwescreen sayo kwii-intshi ze-4 ze-iPhone 5s ukuya kwii-intshi ze-4,7 kwaye isekhona lilahlile ixabiso lemodeli engama-64GB. Ngexabiso elifanayo ne-5GB ye-iPhone 64s (€ 899), ngo-2014 bekukho imodeli eyi-128GB okanye i-iPhone 6 Plus enesikrini esizi-intshi ezi-5,5. Ngokoluvo lwam kwaye ngaphandle kokuthathela ingqalelo imodeli yokungena, amaxabiso ehle ngo-2014. Ukuba behlise amaxabiso abo kancinci kulo nyaka akukho mntu unokukhalaza, kodwa ukuba ayonyuki inokuba ziindaba ezilungileyo kuphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iifowuni zePhone » iPhone 6s » Iindaba ezimnandi: ixabiso le-iPhone 6s aliyi kunyuka
hahahahahaha…. Umama, utsho ukuthini ukukholelwa, kunene?
Ke ukuba ayinyuki ziindaba ezilungileyo? Zingaba ziindaba ezimnandi ukuba ixabiso lehlile, kodwa ke bayayibetha kwakhona iesile lam lelona…. liyahamba ke ilizwe!
Imisebenzi e-Anti sitsho
Ngaba umntu ubeka umpu entlokweni yakho ukuze ukwazi ukuwuthenga? Hayi, kwaye iindaba zilungile ngenxa yokuthelekelela kwaye ziqhotyoshelwe ngakumbi kwilizwe lokwenyani, ngenxa yengxaki ebangelwe yiGrisi (ukwehla kweYuan nedola).
Phendula kwi-Anti Jobs
Molo Antonio. Andazi ukuba uyazi, kodwa ukuba awazi, ndiza kukucacisela. Kukho intetho yokuba ixabiso liza kunyuka. Ingcezu yeendaba eziphikayo ukuba ii-iPhone 6s ziya kuba nexabiso le- € 100 ngakumbi ziindaba ezimnandi, awucingi?
Andazi, umhlathi ekugqibeleni ngoqikelelo lwakho kunye nokushukuma kwengqondo ukuthethelela i-1000 yeefowuni kukuba kubonakala kum ngoku ... i-1000 yeedola kwifowuni ekunyanzela ukuba uyihlaziye kwaye uyizise Inguqulelo abayithethayo ukuze kwiminyaka emi-4 bayiphose emhlabeni ngohlaziyo. Uyazisola. I-iPhone ixabise ngaphezulu kweMacBook Air.
UCaptain Scoundrel sitsho
Emva koko bafunda eli nqaku kwaye kuyinto eqhelekileyo ukuba basibize izombies. Yifowuni enkulu, kodwa ama-200 € / $ amaxabiso asezantsi angalunga.
Phendula uCapitan Canalla
UCaptain Canalla no-xcr43, eli nqaku liqala ngokuthi:
«Kuninzi okuqikelelweyo kwixabiso eliza kuba nalo i-iPhone 6 kunye ne-iPhone 6s Plus. "
Kwisivakalisi sesibini sendisele nditsho ukuba iimveliso zeApple ziyabiza. Kamva ndithi "sinokubona ukukhanya okuncinci ekupheleni kwetonela."
Inqaku liphela ngokuthi «Ukuba behlise ixabiso labo ngaphezulu kulo nyaka, akukho mntu unokukhalaza, kodwa ayonyuki inokuba ziindaba ezilungileyo kuphela.
Ayicacanga into yokuba kule "Akukho mntu" ndibandakanyiwe.
Usibona phi isizathu sokuxabiseka kwexabiso? Kuba ndilahlekile. Umhlathi wokugqibela uthetha ngeenyaniso, ukuba amaxabiso anjani kwaye ayenjani, andiqondi ukuba ubonile phi ukuba ndizithethelele ngexabiso lazo, ngokunyaniseka.
Andikholelwa konke konke, akukho nto ithi la maDatshi, akukho nto ivumayo. Into yokuqala ukuba ixabiso likhulule? Ngaba kuphuculwe ikhamera, mhlawumbi i-2GB ye-RAM, ukukhanya kwikhamera yangaphambili, njl.njl. Undinika hayi. USegundo uthi umbala wepinki awuzukubakho xa bonke abahlalutyi abagqwesileyo bethatha kancinci ukuba uyakuba njalo. Kundinika ukuba aba maDatshi abazi nokuba umoya uvela phi. Ndiyathemba ukuba iyandibhida.
Molo, Iphonero. Kuyinyani ukuba uninzi luthetha ngepinki, kodwa amarhe amva nje athi yigolide enemibala yobhedu, hayi epinki. Kufana negolide emnyama. Kuyinyani ukuba amaDatshi akathethi ngeendidi ezimbini zegolide, kodwa amarhe amva awabizi pinki.
Ngokubhekisele kwixabiso, kuyinto eqhelekileyo ukuba ingonyuki. I-iPhone ye-6GB ine-NFC, irekhoda kwi-16fps kunye nescreen esikhulu se-240, kwaye ayikhange inyuke ngexabiso. Njengoko benditshilo kwinqaku, i-0,7GB ye-iPhone 5s yayixabisa i- € 64 kwaye i-899GB ye-iPhone 6 yayixabisa i-64, eyi- € 799 engaphantsi kwemodeli yangaphambili. Ngexabiso elifanayo besinayo i-iPhone enescreen esikhudlwana, ibhetri engcono kunye ne-OIS (ukongeza kuyo yonke into enxulumene nayo ne-100) okanye imodeli ye-6GB.
AmaDatshi anokugqibela ngokungalunganga, kodwa ixabiso lentengo licace gca.
Ndihlela uluvo lwam ukongeza ukuba iflash yekhamera yangaphambili kuthiwa yinxalenye yesoftware.
Kodwa ayizukuthoba nokuba kunjalo ...
Enkosi. Ngokucacileyo luluvo lwam nje kwaye ndinethemba lokudideka.
Paul, umhlathi wokugqibela awuqondwa kwaphela. Andazi nokuba ndityebile na, okanye wenza ingxaki.
“Ngexabiso elifanayo ne-5GB ye-iPhone 64s (€ 899), ngo-2014 bekukho imodeli eyi-128GB okanye i-iPhone 6 Plus enesikrini esizi-intshi ezi-5,5. Ngokoluvo lwam kwaye ngaphandle kokuthathela ingqalelo imodeli yokungena, amaxabiso ehle ngo-2014. Ukuba behlise amaxabiso abo kancinci kulo nyaka akukho mntu uzakukhalaza, kodwa oko akukonyuki kungaba ziindaba ezimnandi kuphela. "
Ndicinga ukuba kukho into engekhoyo apha
Molo, Iphone. Ndithetha oku kulandelayo:
Iifowuni ze-5 ze-64 = € 899. I-iPhone 6 yama-64 = € 799.
Ukuba sifuna ukuchitha imali efanayo, ngo-2014 (unyaka wokukhutshwa kwe-iPhone 6), nge- € 899 sasine-6GB i-iPhone 128 (iphindwe kabini kunyaka ophelileyo) okanye i-iPhone 6 Plus (ene-OIS, ibhetri enkulu kunye nescreen).
Imodeli ye-16GB igcine ixabiso layo.
Yiza, amaDatshi akanalwazi. Thetha ukuthetha kwaye ungazi. Kwakucacile ukuba amaxabiso aya kunyuka nezinto ezintsha eziziswa yi-iphone6S. Kwaye eSpain, njengesiqhelo, ngokulibaziseka nangaphezulu koko, i-mega iyabiza.
Ungayiseta njani ialam kwi-iPhone yam